Dadaalka Guddoomiye Cabdi Xaashi Federaalka Soomaaliya Ma Ku Badbaadi Doonaa? - Awdinle Online
Kalfadhigii 7aad ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliyeed (BFS) oo furmay June 6, 2020 wixii ka dambeyey waxaa dalka soo wajahay dabeylo isbeddel wata oo siyaasaddii cakiraneyd ee Soomaaliya xal ma u noqon doonan.
Guddoomiyaha Aqalka Sare ee BFS mudane Cabdi Xaashi Cabdullahi ayaa talo ku soo jeediyay in June 25, 2020 xukuumadda iyo maamul-goboleedyaduba in ay isugu yimaaddaan shir lagu xalliyo khilaafka u dhexeeya u dhaxeeya.
Talada uu soo jeediyay Guddoomiye Cabdi Xaashi, waxaa ka dhashay durbadiiba walaac.
Si kastaba ha ahaate, DFS ayaa u tanaasushay Axmed Maboobe una aqoonsatay inuu yahay madaxweynaha maamul-goboleedka Jubbaland muddo labo sanadood ah laga bilaabo dhammaadkii xilfadhigiisii hore.
Arrinka Mudane Madoobe waxaa muuqato in dowladda Kenya ay dhiig-miirasho (exploitation) ku sameynayso nuglaanta Soomaaliya iyadoo u dhaqmeysa sidii guumeyste amase dowlad quwad badan oo aan ixtiraameyn qaranimada Soomaaliya.
Baaqay wadahadaladda mudane Cabdi Xaashi waxuu u muuqdaa fursad lagu badbaadin karo dowladnimada dalka loogana gudbi karo siyaasadda cakiran (awood qaybsiga nidaamka federalka), walow fududeynta doodaha wax dhisaya aysan noqon doonin caqabad yar (oo sahlan).
Khilaafka khaliijka waxuu khatar hor leh ku kordhiyey xasilloonidarrada dalka.
In muddo ah arrimaha gudaha Soomaaliya waxaa faraggelin toos ah ku hayay dalka Imaaraadka, kaas oo kalsoonidarrada xukuumadda iyo madaxda maamul-goboleedyada, gaar ahaan Somaliland iyo Puntland sii xumeeynaya.
Inkastoo tillaabooyin horumar leh lagu gaaray doorashooyinkii dadbanaa ee 2012 iyo 2016, haddana dalku mau dhisan maxkamad dastuuri ah oo dib loogu noqdo taas ayaa u fududeysay shisheeyuhu inuu sidii uu doono u walaaqo siyaasadda gudaha Soomaaliya oo xasaasiyad qabiil aysan ka marneyn.
Rajadu waxay tahay in shir ay dhexdhexaadinayaa xildhibaanada Cabdi Xaashi uu garhayeenka u yahay ka soo baxaan tillaabo wax ku ool u ah wadashaqeynta dowladda dhexe iyo maamul-goboleedyada xilli midnimada Soomaaliya looga doodayo Jabuuti.
Previous articleWasiirka Amniga Hirshabelle oo Sheegay in AJaanibta Shabaab ay ka buuxaan deeganadooda.
Next articleTaliska Booliska oo sheegay in Muqdisho ku qabteen shabakad ka tirsan Al- Shabaab